Kedu ka esi enweta ọdụ ụgbọ elu VIP? | Akụkọ Njem
A bịa n’ịga njem, ọkachasị mgbe anyị ga-aba ụgbọelu na-ejikọ iji ruo ebe anyị na-aga, ogologo ọche ndị ahụ nwere ike bụrụ nke kacha njọ ụgbọ elu.
Ọ bụ ezie na anyị na-achọ ụzọ isi mee onwe anyị obi ụtọ n'oge awa nchere, ọ dị ka oge anaghị agafe, ahụ anyị anaghịkwa agwụdebe ịnọ n'oche nke ọnụ ụlọ ndị a na-eche eche. Tohapụ ikwu na mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike ịchọta ohere iji nọdụ ala iji zuo ike ma hapụ ụyọkọ ndị na-eso anyị.
Agbanyeghị, ihe dị ezigbo iche n'ọdụ ụgbọ elu VIP. A kwadebere ha niile nke ntụsara ahụ: sofas dị nro na oche, ohere ịntanetị, ezigbo nhọrọ nke kọfị kacha mma ... Enwere ụfọdụ ndị na-aga n'ihu ma nwee nnukwu nri, nnukwu aquariums, saunas Finnish na ọbụna ụlọ ọgwụ.
Ma olee otu anyị ga-esi nwee obi uto ndị a dị egwu iji mee ka oge nchere na ọdụ ụgbọ elu bụrụ ihe obi ụtọ? Nọgide na-agụ!
1 Ihe mbufe
2 Mmemme iguzosi ike n'ihe ụgbọ elu
3 Day gafere
4 Iche Uche VIP iche
5 Kaadị iguzosi ike n'ihe azụmahịa
7 Banye na ebe ezumike VIP
8 Enyi a Ukwuu
Ibu ụzọ gafere bụ nhọrọ kachasị mma ichefu maka ime ụlọ nchere, a kọwaala ya dịka otu n'ime mmemme ndị kachasị ọsọ n'etiti ndị njem gburugburu ụwa. Karịsịa maka ndị na-eme njem mgbe mgbe.
Na ya, ị nwere ike ịnweta ngwa ngwa karịa otu puku ụlọ ezumike VIP gburugburu ụwa. Ibu ụzọ gafere ụzọ atọ dị iche iche dị iche iche maka mmefu ego ndị ahịa.
Ugwu: Gụnyere nleta na-enweghị nsọtụ ụlọ VIP. Efu kwa afọ nke euro 399.
Ọkọlọtọ Plus: Nleta 10 n'efu na VIP ezumike nke kwa afọ na-efu euro 249. Nleta ndị ọzọ na-efu euro 24.
Ọkọlọtọ ọnụego: A na-akwụ ụgwọ njem a na euro 99 kwa afọ na-akwụ ụgwọ euro 24 oge ọ bụla ịchọrọ iji ọnụ ụlọ VIP.
Mmemme iguzosi ike n'ihe ụgbọ elu
Ekele maka mmemme iguzosi ike n'ihe banyere ụgbọ elu, anyị nwere ike ịnụ ụtọ nkwụsị niile nke nkasi obi. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ị na-eji otu ụgbọ elu ahụ gaa ọtụtụ njem, kaadị ndị otu ga-enye gị ohere ịnweta ebe ezumike VIP nke ọdụ ụgbọ elu na-enweghị akwụ ụgwọ otu euro. Otu bụ eziokwu ma ọ bụrụ na ị ofufe azụmahịa ma ọ bụ klas mbụ. Na-ada ezigbo mma?
Ọ bụrụ n’ịgaghị njem ọtụtụ mana achọghị ịta ahụhụ oge awa 7 n’ime ụlọ ndozi na-echere, ọ kachasị mma ịzụta ụbọchị iji nweta ụlọ VIP.
Ọ bụrụ n ’ọ bụrụ na ị na-ahụ ụzọ nke ọma ma ị na - eme ya n’oge, ọ ga - efu gị ihe ruru euro 20 na 80. Ọnụ ego kwesịrị ekwesị iji nweta nkasi obi kachasị mma na gburugburu okomoko wee rute ebe ị na-ezu ike ma zuru ike.
A na-atụ aro ya ka ịnweta ebe ezumike nke VIP nke ụgbọ elu ị na-aga n'ihi na n'oge ị na-egosi tiketi ọ ga-abụ na ị ga-erite uru site na nkwalite ma ọ bụ mbelata pụrụ iche.
Iche Uche VIP iche
Ndị nwere oke mmefu ego iji gaa njem kwesịrị ịma na enwere ụlọ ezumike VIP nọọrọ onwe ha, nke ọnụahịa ha na-abụkarị ihe dị ka euro 20. Usoro kachasị mma nke na-enye ụdị ọrụ a bụ Premium Traveler, Plaza Premium na Airspace.
N'ime ha ị nwere ike ịchọta ihe niile na-egosi ọdụ ụgbọ elu VIP: ikuku dị jụụ, oche ntụsara ahụ na nri bara ụba. Nanị ihu ala bụ na ọtụtụ n'ime ụlọ ezumike ndị a na-emechi tupu ọchịchịrị.
Kaadị iguzosi ike n'ihe azụmahịa
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-enye ndị ahịa ha kaadi iguzosi ike n'ihe nke na-enye ha ohere ịnweta ụfọdụ ezumike VIP n'ọdụ ụgbọ elu mgbe ha na-eme njem.
Ngwa mkpanaka nwere ike ịbụ ihe ngwọta nye ọtụtụ nsogbu anyị. Nke a bụ okwu Loungebuddy, ngwa dị maka gam akporo na iOS nke na-enye ndu zuru oke maka ebe ezumike VIP niile na ọdụ ụgbọ elu ọ bụla.
Ngwa a gụnyere ọrụ ndị kachasị adọrọ mmasị, foto na nkọwa nke ụlọ ezumike VIP ma gosipụta onye n'ime ha bụ nke kacha mma maka mkpa gị na ọnọdụ gị naanị n'otu pịa.
Banye na ebe ezumike VIP
Nhọrọ ọzọ bụ ịga na tebụl ụgbọ elu anyị na-eme njem wee jụọ maka ezumike VIP na ọdụ. N'ime otu ọdụ ụgbọ elu enwere ike ịnwe nnọkọ VIP dị iche iche ma ha niile nwere ọrụ na edemede dị iche iche.
Iji banye na ya ga-adị mkpa ịkwụ ụgwọ ndepụta ego. Ọnụahịa nke ọrụ a ga-adabere n'ụdị ụlọ VIP nke ịchọrọ ịbanye.
Enyi a Ukwuu
Oge ikpe azu, nhọrọ akụ na ụba na nke chọrọ imi karịa. Onye ọ bụla na-eme njem klaasị mbụ nwere ike iweta onye otu ya na VIP ezumike nke nhọrọ ha tupu oge eruo. Ndị nwere ikike maka ndị mmadụ nwere ike ịnwa ịmalite mkparịta ụka dị ka onye njem dị otú ahụ ma nwalee ọdịmma ha. Ga-enwe ike?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Kedu ka esi enweta ọdụ ụgbọ elu VIP?